Beesha wasiirkii la dilay oo beenisay warar been abuur oo laga faafiyay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Beesha wasiirkii la dilay oo beenisay warar been abuur oo laga faafiyay (AKHRISO)
Kullan ay isugu yimaadeen dhamaan odayaasha, siyasiiyiinta, culumaa’udiinka, haweenka, dhalinyarada iyo waxgaradka beesha Hubeer ee Digil Mirifle iyo wafdi siyaasiyiin rasmi ah oo laga soo diray maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiin ka socday maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulan yeeshay maalmihii Jimcaha iyo Sabtida ee taariikhdu aheyd 05-06/05/2017.
Kullankaas ayaa looga arrinsanaayey dilkii foosha xumaa ee 3/05/2017 loo geystay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska ee dowlada federaalka Soomaaliya Marxuum Xildhibaan/Wasiir Cabaas C/laahi Sheikh Siraaji.
Dilkaas oo ay geysteen illaalada hanti-dhowrihii hore ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale, isaguna uu la socday. halkaas uu ku geeriyoday wasiir Cabaas (Allah ha unaxariistee).
Dilkaan ayaa ka dhacay albaabka hore ee madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo su’aalo badan la iska weydiiyay sababta keentay in meesha ugu amaanka badan caasimadda dalka lagu toogtay wasiir Cabaas.
Kulanka beesha waxaa kasoo baxay qodobada hoos ku xusan:
(2) In Beesha Hubeer aysan wax waan-waan iyo wada xaajood ka gelin dilka wasiir/marxuuma Cabaas, maadama uu socdo baaritaan dawladeed.
Haddaba kulan kale oo maanta ay Beesha Hubeer kusoo gaba-gabeysey kulamadii hore waxa ay caddeyneysaa si kululna u beenineysaa warar been abuur ah oo shalay iyo maanta lagu baahiyey baraha bulshadda iyo qaar ka mid ah website-yada af Soomaaliga wax ku qora, been-abuurkaas oo lagu sheegay in wada-xaajood qaab qabiil lagu xallinayo dilka wasiir Cabaas. Ayadoo Beeshu ay ka dhur sugeyso natiijada baaritaanka ay wado dowladda.
Xafiiska Warfaafinta Malaaqa Guud ee Beesha Hubeer:
Malaaq Xasan Shurre Maxamuud Yaxye.
Malaaqa Beesha Hubeer Malaaq Xasan Shurre Maxamuud Yaxye